Warar - Warshad siisa dhalooyinka quraaradaha iyo dhalooyinka kombucha
Waa maxay Kombucha?
Kombucha waa cabitaan shaah khamiir leh. Waxay guud ahaan u isticmaashaa shaaha madow ama shaaha cagaaran alaabada ceeriin. Waxay ka kooban tahay noocyo kala duwan oo khamiir iyo bakteeriya ah, iyo sidoo kale asiidhyada dabiiciga ah, enzymes firfircoon, amino acids iyo polyphenols oo ay soo saaraan sheydaan. Waxay hodan ku tahay fitamiinada sida B3 iyo B12. , Waxay wax ka tartaa caafimaadka xiidmaha aadanaha.
Sida loo sameeyo Kombucha？
Sameynta kombucha kuu gaar ah runtii waa hawl la yaab leh oo sahlan oo toos ah. Marka hore, samee shaah adag, macaan oo u daa inuu qaboojiyo. U wareeji weel galan ah oo ku dheji qashinka dareeraha. Badanaa way sabeysaa, laakiin sidoo kale waxay hoos ugu dhici kartaa xagga hoose, dhinac ayey u sabayn kartaa, ama kor iyo hoos ayey ugu dhaqaaqi kartaa inta lagu jiro halsanleyda; waxaas oo dhami way fiican yihiin!
Ku dabool weelka laba-lakab oo ah tuwaallo saxan oo si wanaagsan loo tolay oo lagu dhejiyay xarig caag ah. Tani waxay u oggolaanaysaa hawada qulqulka weelka waxayna ka ilaalisaa cayayaanka iyo wasakhda inay helaan. Weelka dhig meel aan ka fogeyn qorraxda tooska ah halkaasoo aan si weyn looga jaan goyn doonin halkaasoo heer kulka uu yahay qiyaastii 70 ° F - 75 ° F celcelis ahaan. Kombucha si dhakhso leh ayuu u kululaan doonaa heerkulka sare ama wuu ka gaabin doonaa heerkulka hoose.
U oggolow kombucha halsano illaa saddex toddobaad. Inta lagu jiro wakhtigan, khamiirka iyo bakteeriyada ku jirta scoby waxay bilaabi doonaan inay cunaan sonkorta ku jirta shaaha macaan, kombuchakuna wuxuu si tartiib tartiib ah u noqonayaa macaan badan. Ku billow inaad dhadhamiso toddobaad ka dib; kaliya wax yar ka soo shub weelka dhalada. Marka kombuchaku adiga kufiican yahay, wuxuu diyaar u yahay in la dhalo.
Sida loo Dhalo Kombucha？
Kahor dhalada, hubi inaad ka saarto oo aad dhigto laba koob si aad ugu isticmaasho kombucha loogu talagalay dufankaaga soo socda!
U wareeji kombucha haray si aad u nadiifiso dhalooyinka quraaradaha ama dhalooyinka dhalada ah. Hubso koofiyadaha oo ka tag kombucha heerkulka qolka hal ilaa shan maalmood si aad uhesho karboon. Dufcad kasta oo kombucha ah waxay ku qallajin doonaan qadar yar oo kala duwan oo ku saleysan inta sonkorta weli ku jirta kombucha, heerkulka, iyo haddii aad ku dartay wax uun dhadhan ah.
Hubi maalin kasta adigoo furaya mid ka mid ah dhalooyinka. Markaad maqasho jilicsan pop! oo aad aragto goobooyin ku qulqulaya dusha dareeraha kadib markaad furto, waa diyaar! Qaboojiyaha dhalooyinka oo dhan cab laba toddobaad gudahood.
Hoos waxaa ku yaal dhalooyinka quraaradaha iyo dhalooyinka dhalada ugu fiican ee kombucha, fadlan na raac!
Dhalooyinka Gawaarida Warshadaha Soo Saar Dhalooyinka Ugu Fiican - Dhalooyinka Kombucha oo leh Daboolo Sare oo Swing ah
★ TAYO AAD U WEYN - Qalabka dhalada ee dhalada sare nalaga duubay waxaa lagu farsameeyay muraayadda ugu tayada fiican. Dhaladaan cabitaanka dhalada ahi waa BPA Bilaash ah 100% muraayadaha darajada cuntada leh, imtixaanka fasalka cuntada waa la ansixiyay, cadeynta daadinta, ma jiro sun, ilaalinta cuntada oo aamin ah. Mashiinka weelka lagu dhaqo oo aamin u ah nadiifinta hufan iyo dadaal la’aan.
★ ILAALI NADIIFAD - Dhalooyinka quraaradaha ah oo dabool leh, waa dhalo ku habboon in lagu keydiyo cabitaannada guryaha lagu sameeyo ee noocyadooda kala duwan leh. Ku habboon cabitaannada kaarboonka leh maadaama ay gaaska hayso. U isticmaal dhalada, u adeegida, iyo muujinta khamriga, cabitaannada fudud, biyaha, biirka, casiirka, iyo cabbitaanka.
★ LEAKPROOF & AIR TIGHT CAP: Furka daboolka laga qaadi karo wuxuu hubiyaa waxyaabaha ku jira gudaha inay ahaadaan kuwo cusub sidii maalintii aad keydisay. Daboolka caddaynta ee dhalooyinka wax soo saarka ayaa abuuraya carqalad hawo la'aan ah taas oo ka dhigaysa cabitaanka la xiray oo ka hortagaya kaarboonka iyo halsannada.
Dhalooyinka Cabitaanka Safarka ah ee Dib Loo Isticmaali Karo oo leh Dabool Hawada Caaga ah ee Kombucha
B Dhalooyinka Casiirka ee Tayada Tayada Tayada ah ee Casiirka】 16 oz dhalooyinka dhalada ah. Dhalooyinka Wetroyes ee wax lagu cabo waxay ka samaysan yihiin muraayad tayo sare leh oo galaas ah, 100% BPA bilaash ah, macdanta `` lead '', cadaynta dillaaca cabitaanka caafimaadka leh. Mashiinka weelka lagu dhaqo oo nabdoon. Si ka duwan dhalooyinka biyaha caagga ah, halkaasoo sunta waxyeelada leh ay ku dhex milmi karaan waxyaabaha ku jira. Dhalooyinkayaga biyaha waa kuwo aan sun ahayn, bey'adda u roon, dib loo isticmaali karo, dib loo isticmaali karo oo waari kara. Aynu macasalaameyno dhalooyinka caagga lagu cabo.
Resh Freshness & Leakproof Airtight one Cidina ma jecla daadinta dhiiga ama daadinta. Weel kasta oo casiir dhalo ah oo ka soo baxa Wetroyes wuxuu leeyahay dabool hawo hawo leh si uu u ilaaliyo casiirka cusub, cabitaanka, biyaha la isku daro, liinta xagaaga, kombucha, caanaha lowska, kafee qabow, shaaha barafka ku jira qaboojiyaha ama socodka.
【Nadiifi Dhalooyinka Dhalada ah ee Biyaha Oo Kufiican Cabitaanka】 Muuqaalka ugu sareeya ee kuu ogolaanaya inaad ogaato waxa gudaha ku jira. 16 oz oo ah dhalooyinka wax lagu cabo ayaa ku haboon u adeegida iyo soo bandhigida casiirka, macmacaanka guryaha lagu sameeyo, kombucha, shaah barafaysan, caano-maalmeedka, cabitaanka qallalan. Casiirkaaga cusub ee la tuujiyey ayaa u muuqda kuwo quruxsan miiskaaga. Carruurtaadu way jeclaan doonaan inay ka cabbaan dhagaxan weyn ee dhalooyinka cabbaya!
16 OZ Afka Weyn ee Daaweynta Cabitaanka with Afka oo dhan Juice Dhalooyinka waxay ku habboon yihiin in lagu shubo miraha iyo barafka barafka ah isla markaana ay fududahay in la cuno cabitaanno qafiif ah, gariir baraf ah & baraf baraf leh qaaddo. Caagadaha biyaha ee ballaaran ayaa kuu oggolaanaya inaad si fudud u faaruqiso una nadiifiso. Looma baahna funnels ama buraash burushka.
【Si sahlan oo loo kaydiyo oo loo qaado design Naqshadda caatada ah ayaa fududeyneysa in la geliyo qaboojiyaha, boorsada qadada, boorsada dhabarka ama koobka gaariga. Taas ayaa kuu ogolaaneysa inaad ku qaadato dhalooyinka casiirka dhalada meel kasta oo aad tagtid: iskuulka, shaqada, safarka, gaariga.
Ujeeddo Badan - Waajibaad Culus - 64 Oz Dhalooyinka Cagaaran ee Dhalada ah oo leh Dabool Hawo iyo Calaamado - Ku Wanaagsan Kombucha, Qaxwaha Qandho qabow, Shaah iyo Inbadan - Fasalka Cuntada ee BPA
★ TAYO SARE - Dhalooyinkaan waxaa laga sameeyay maaddada dhalada qaro weyn ee bilaashka ah ee tayada liidata leh ee leh caabbinta aadka u saraysa ee kuleylka iyo qabowga isla markaana u adkaysta kiimikada
KU HESHIIS - U isticmaal kuwan dhalooyinka wax lagu shubo oo cabitaan ah. Ku keydi biyahaaga la sifeeyey, casiirka cusub, shaaha, caano ama cabitaanno kale oo ku raaxee muuqaalka casriga ah ee ay bixiyaan.
LACAG LA'AAN AH - Weelkani dib loo isticmaali karo wuxuu ku habboon yahay biirka qabow ee la kariyo, shaaha barafka, halsano, qaxwada lagu kariyo guriga, cabitaanka, khamriga, kiimikooyinka, dareeraha, iyo inbadan
KADHACDO - Jooji adoo isticmaalaya dhalooyinka caagga ah ee jilicsan ee sida dhakhsaha ah u adeegsada oo bilow inaad adeegsato kuwa korriinada ah ee kuu daa'in doona nolol caafimaad leh
QANACSAN: Waan hubnaa inaad jeceshahay Dhalooyinkaas! Naso oo hubi in iibsigaagu ku hoos qoran yahay Damaanad-qaadka LACAGTA LACAGTA. Kaliya nala soo xiriir haddii ay jiraan arrimo kasta.
Dib loo isticmaali karo 32-Ounce Amber Kombucha Dhalooyinka Beeraha
QIIME AF-XIRFAD: Waxaad heleysaa afar dhalo oo wax lagu koriyo ah iyo SIX dabool caag balaaran (haa, 2 dabool dheeraad ah)
MULTI-ISTICMAAL: Wanaagsan Kombucha, kefir biyo, casiir, DIY vanilj, diyaarid guriga, keydka kiimikada & waxyaabo kaloo badan
AWOODDA: 32 oz = 1 rubuc = 4 koob = 950 ml; QAYB: 8.5 "Dheer x 3.75" dhexroor; dhexroor afka dhexroorkiisa 19 milimitir
ILAALINTA UV: Muraayad bunni ah oo bunni ah ayaa ka ilaalisa iftiinka 'ultraviolet light' kaas oo dhaawici kara dhaqamada nool isla markaana baabi'in kara waxtarrada caafimaad; CAPS POLY-SEAL: Kabtu waxay leedahay nashqad isku xidhnayd oo shaanbo ah oo adag
QIIMEYNTA SHAQADA 2AAD: Kombucha, sameynta halsano 2aad oo leh dhadhan fiican ayaa ku habboon cabirkan 32-ounce ah.
Afka Joogtada ah ee Afka Mason Dhalooyinka loogu talagalay Kombucha
Qiyaasta ufiican ee Canning & Cunto Diyaarinta - - 16 oz weel wax lagu kariyo oo dhalo ah waa cabirka ugufiican ee lagu kariyo qasacadaha guryaha lagu kariyo, qajaar macaan, suugada, saxmada, casiirka, keydinta, suugada yaanyada, iyo noocyo kale oo badan. Sidoo kale waxay ku fiican tahay diyaarinta cuntada iyo qaadashada cunnooyinka socdaalka ku jira sida saladhyada, hadhaaga, miro habeenki, miro la jarjaray iyo khudaar.
Ku dar 2 nooc oo Daboolka Hawada ---- Xirmada waxaa ku jira 12pcs dabool hal-jeex ah iyo 12 nooc oo dabool iyo baandho ah, oo buuxin kara dalabaadkaaga badan. Ka samaysan waxyaabo bir ah, daboolladan waxaa loo isticmaali karaa marar badan. Daboolka furka leh silikoon liner ah oo hubiya shaabadda hawo-mareenka, taas oo ka ilaalin doonta cabitaannada dhadhamiska cusub iyo ka hortagga cunnooyinka qallalan inay dhacaan
Afka Joogtada ah - Furitaan balaaran (dhexroor 2.7 inji ah) dhalada dhalada ah waxay sahlaysaa in alaabada la soo qaado. Koofiyadaha lacagta ayaa sameeya xirnaansho aad u qurux badan oo alaabooyin badan ah. Afka ballaaran wuxuu u oggolaanayaa marin u helka sagxadda weelka jarjaran si fudud oo nadiif ah loogu nadiifiyo gacmo maro qoyan.
Isticmaal Badan ---- Qiyaas cajiib ah iyo hal-abuurnimo, waxaad u isticmaali kartaa dhalooyinkaan wax lagu qurxiyo siyaabo kala duwan. Marka laga reebo qasacadaynta iyo khamiirinta, waxay ku fiican yihiin keydinta cuntada qalalan sida sonkorta, digirta, xawaashka, boorashka, baastada, buskudka, iyo nacnaca. Waxaad sidoo kale sameyn kartaa mashruuc adiga kuu gaar ah oo DIY ah, qurxinta guriga leh dhalooyinkaas mootooyinka ah.
Dhalooyinka adag iyo kuwa cad ---- oo ka samaysan bilaa lacag la'aan ah BPA galaas raashin heer sare ah leh, dhalooyinka qasacadaysan ayaa adag oo ku filan isticmaalka guriga maalin kasta. Way cad yihiin, markaa si fudud ayaad u aqoonsan kartaa waxa ku jira adoo jaleecaya. 16pcs dheeraad ah sumadaha nuuradda ayaa kaa caawinaya inaad calaamadeyso dhalooyinkaan aad uga fudud. Waa shey anfacaya, ujeedooyin badan u leh gurigaaga iyo jikadaada.
Naga soo wac maanta 0086-0516-85555108 ama iimayl u soo dir info@wetroyes.com
Waqtiga boostada: Jul-01-2021